FILOHA ANDRY RAJOELINA : « Tsy hanangana saina fotsy i Madagasikara »
Notokanan’ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina sy ny vadiny, tamin’ny sabotsy teo, ny ivon-toerana faharoa hitsaboana ireo mararin’ny covid-19 eto amin’ny Faritra Analamanga na ny « Centre de Traitement Covid-19 Mahamasina ». 28 juillet 2020
Ity no ivon-toerana faharoa napetraky ny Filoha, izay tafiditra indrindra ao anatin’ny paikady hiadiana amin’ny covid-19 sy handraisana an-tanana haingana ireo mararin’ny aretina.
« Tsy hanangana saina fotsy ary tsy hanaiky ho resin’ny covid-19 i Madagasikara », hoy ny Filoha nanao fanamby nandritra ny fitokanana ity ivon-toerana ao Mahamasina ity. Mahazaka marary miisa 250 ity ivon-toerana ity, izay mitsinjara ho lehilahy 150 sy vehivavy 100. Tsy hiandry ela fa amin’ity anio ity ihany dia hisokatra sy hiasa izy io. Ankoatra ny maha toerana fandraisana marary azy dia hisahana ny fanaovana fizaham-pahasalamana ireo ahitana soritr’aretina sy hanaraha-maso ireo marary nahitana soritr’aretina saingy efa tsy atahorana intsony ny CTC Covid-19 Mahamasina. Hampihena isa ireo marary raisina an-tanana ka niditra hopitaly ny ivon-toerana. Afaka manohy ny fanaraha-maso ny fahasalamany ihany ny marary efa tsy ahiana intsony ny ainy ao Mahamasina.
Natao manara-penitra ny toerana
Natao manara-penitra tanteraka ny toerana handraisana ireo marary. Mizara efitra ny marary misy soritra aretina atahorana sy ireo tsy ahiana intsony. Baikon’ny Filoham-pirenena moa ny tsy hisian’ny marary tsy mahita andehanana na tsy misy mandray noho ny tsy fisian’ny milina fanodinana oksizena na « concentrateur d’oxygène ». Ahitana fitaovana feno, araka izany, ny CTC Mahamasina. Misy ny fandriana 250 handraisana ny marary. Eo ihany ny koa « concentrateur d’oxygène » sy ny « radiographie mobile » ilaina amin’ny fiatrehana ny soritr’aretina atahorana.
Misy efitra natokana ho an’ny mpitsabo
Misy ihany koa ny tobim-panafody sy ny efitra manokana ho an’ny mpitsabo. Napetraka ihany koa ny efitra manokana hiarovan-tenan’ny mpitsabo mialoha ny handray marary. Eo am-pahatongavana, efa misy sahady ihany koa ny toerana handraisana ny marary sy ny fanafody maika toy ny seraoma sy oksizena ho an’ireo marary tena ahiana ny ainy ka tsy afaka miandry. Manana fotodrafitrasa sy fandriana mihoatra ny mpitsabo amin’izao, amin’ny alalan’ny fametrahana ny CTC covid-19 Mahamasina.
Raha tsiahivina dia efa nisy koa ny fametrahana ny CTC Ivato, izay mahazaka marary 400 isa, saingy raha ny tatitra azo dia 100 ihany amin’izao ireo marary raisina ao an-toerana.
Efa tonga ny fitaovana nohafaran’ny Fanjakana
Efa tonga omaly alahady koa ny « concentrateur d’oxygène » nohafaran’ny Fanjakana malagasy hiatrehana ity aretina ity sy hamonjena ireo marary mafy mitondra ny tsimokaretina. Miisa 2400 ireo nohafarana raha toa ka 1 000 no nanaovan’ny Minisiteran’ny Fahasalambahoaka fangatahana. Fiaramanidina mpitatitra entana miisa 2 moa no ho tonga amin’ity herinandro ity hitatitra ireo fitaovana ara-pahasalamana ho an’i Madagasikara.
Nitsidika ny « Plateforme digitale nationale covid-19 »
Nitsidika ny Plateforme digitale nationale covid-19 ao Mahamasina ihany koa ny Filoha mivady ankoatra izay. Zava-dehibe manampy amin’ny fiatrehana sy ny fitantanana ny covid-19 ny fananana ny antontan’isa mazava momba ireo ahiana mitondra ny aretina sy ireo mitondra ny aretina. Voarakitra eo anivon’ny vovonana nomerika ity avokoa ny mombamomba ireo sokajin’olona ireo. Ity vovonana ity ihany koa no afaka miditra an-tsehatra haingana amina trangana aretina hita. Isan’izany ny famantarana haingana ny toerana misy ny hopitaly na toeram-pitsaboana afaka mandray marary iray.
Hopitaly 46 misy « concentrateur d’oxygène »
Miisa 46 ireo hopitaly eto an-drenivohitra misy ny « concentrateur d’oxygène », ka afaka miantsoroka ny fandraisana ny marary. Nilaza hatrany ny Filoham-pirenena fa miara-miasa akaiky ny Governemanta amin’ny fitadiavana vahaolana amin’ny aretina. Manohana ny Minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka ihany koa ny Fanjakana amin’ny fiatrehana ny ady. Ahitana fivoarana be ny fitantanana ny ady amin’ny covid -19, ka isany nahomby tamin’izany ny fampiasana fitaovana hamonjena haingana ny marary misy soritr’aretina atahorana.
Mivoy resa-poko sy fankahalana ny filohan’ ny oniversiten’i Toamasina sy ny ekipany RAHARAHA BARIKADIMY (4580) 25 février 2021 Hivadika ho “tolona” ny tatitry ny Depiote Tim MIKATSAKA FANDATSAHAN-DRA (230) 25 février 2021 Namoahana “Filazana Fikarohana” i Marco Randrianisa FIANTSOANA “ACTE ISOLÉS” (139) 2 mars 2021 Tsy hiara-dalana amin-dRavalomanana intsony ? FANAMBARAN’NY ANTOKO MFM (135) 2 mars 2021 Handray andraikitra hatrany hisorohana izay rehetra mety ho fanakorontanana EMMO/NAT (74) 25 février 2021 « Hatao laharam-pahamehana ny fampianarana » FILOHAM-PIRENENA ANDRY RAJOELINA (69) 25 février 2021